Eyona ndlela ithandwayo nexhaphakileyo yokuvalelwa | Amadoda aQinisekileyo
Ukuvalelwa bekuyinto yangaphambili nasemva ebomini babantu abaninzi. Ewe akukho nto iqhelekileyo ngayo. Imalunga notshintsho kwindlela yokuphila nokuqonda inyani echaphazela ilizwe lethu kunye nehlabathi liphela. Ngenxa yokwanda kosulelo lwe-coronavirus, kuye kwafuneka siziqhelanise nobomi ekhaya. Ukwenza oku, siphuhlisile imikhwa yokuvalelwa loo nto isenze ukuba siphile kamnandi ngakumbi. Kuba oku kuvalelwa kuyinto engaqhelekanga, kufanelekile ukuba sithethe ngezinye zeendlela esizenzileyo ngeli xesha.
Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku ukuba likuxelele malunga neyona ndawo ixhaphakileyo yokuvalelwa ebantwini.
1 Iifowuni zevidiyo njengezonyulo
2 Ukuba wedwa njengenye yeendlela zokuvalelwa
3 Funda ukupheka nokuzonwabisa
4 Zilolonge ngakumbi kunangaphambili
Iifowuni zevidiyo njengezonyulo
Ukuba kukho into ephosiweyo xa unyanzelwe ukuba utshixe ekhaya, ngabahlobo kunye nosapho. Enkosi kubuchwephesha esinabo namhlanje, sinokunxibelelana ngokuqhubekayo ngalo lonke ixesha. Ukongeza, iifowuni zevidiyo zinethuba lokuba ungabona omnye umntu kwaye kunika imvakalelo yokuba ukunye nabo.
Kuyinyani ukuba bekubaluleke kakhulu ukufumana iindlela zokuvalelwa ezisinceda ukuba sigcine impilo kwaye zisinike intuthuzelo ukuze sigcine impilo yethu kwaye siyiphucule. Kubaluleke kakhulu ukukhuthaza ubudlelwane bezentlalo, ukutya ngokufanelekileyo, ukomeleza iipateni ezibangela ukulala kunye neendlela ezithile ezisebenza ukugcina ucwangco.
Phakathi kwezicelo Eyona isetyenziselwa ukwenza iifowuni zevidiyo ibe yi-Zoom. Kwaye kukuba ngamaxesha okuvalelwa ubudlelwane kunye nomnye umntu kubalulekile kuba ifuna inkxaso kunye nenkxaso yeemvakalelo. Enye yeempazamo ezenziweyo ngexesha lokuvalelwa kukusebenzisa imiyalezo emininzi kakhulu kwangoko. Kwaye kulula kakhulu ukunxibelelana netekhnoloji ekhoyo namhlanje. Nangona kunjalo, xa sithetha nomntu ngokusebenzisa izicelo ezinje ngeWhatsApp, sifumanisa ukuba umntu ngamnye ucoca ngokwakhe indlela abaziva ngayo ngalo mzuzu. Kodwa asiziboni iimpawu zomntu zonxibelelwano ezingezizo zomlomo. Ke ngoko, ukungaqondani kunokudalwa esingenakukusombulula ngokwethu kuba asinakuphuma endlwini.
Ke ngoko, kuye kwakhetha ukugcina unxibelelwano ngeevidiyo ezinezandi apho sinokuthi sixabise ithoni yelizwi kunye nezimbo zomzimba.
Ukuba wedwa njengenye yeendlela zokuvalelwa
Kufuneka siyiqonde into yokuba, nangona singabantu basekuhlaleni, sikwafuna ukuba bodwa. Kubo bonke abantu abaphumelele ukuvalelwa bodwa, akukho mfuneko yokuba bazikhathaze ngale nto. Kodwa bakhona abanye abantu abaye bavalelwa njengesibini, usapho okanye abantu ohlala nabo. Kulapho umntu ngamnye kufuneka agxile ekufumaneni ixesha lakhe. Ngokufanelekileyo, Sisithukuthezi esikhetha ngokuzithandela.
Singabantu basekuhlaleni abafuna ubudlelwane nabantu ngakumbi okanye ngokuqhubekayo. Nangona kunjalo, sidinga ixesha lokuphepha ubomi bethu kunye neengcinga zethu. Ngubani ongayazi indlela yokuphila kunye naye akanakho ukuba kunye nomnye. Ke ngoko, kubalulekile ukubekela bucala ixesha lezinto ezithile wedwa kunye nokuhlangabezana neemfuno zomntu ngamnye. Esinye sezinto ezibangela umdla zokuvalelwa ezihambelana nezinto ezenziweyo kukuba Intengiso yamadoda ophulula amalungu esini ikhulile. Ezi zi eyona abaphulula amalungu esini, Abona babethengisa kakhulu ngexa lokuvalelwa. Umsebenzi ngamnye uxhomekeke kukhetho lomntu, kodwa zinokuvela ekufundeni, ekuphekeni, ekuzonwabiseni nasekungenzi nto.
Funda ukupheka nokuzonwabisa
Baninzi abantu abaye baxoxa phakathi kwazo zombini ezi zinto: kwelinye icala zivelise ngakumbi kunakuqala ukungakwazi ukufumana elinye ithuba elininzi kangaka. Kwelinye icala, ukonwabele ukwenza nto kuba asinakuze sikwazi ukuba nomnye umsitho kunye nexesha elininzi kangaka. Oku kuthetha ukuba abaninzi bazinikele ekhitshini ukuze bafunde iiresiphi kwaye bazinyange ngakumbi okanye ngokusempilweni.
Ukusukela ukuba kuye kwavela iindlela ezahlukeneyo zokuvalelwa ezibangela uxinzelelo, abantu abaninzi bonyuse umnqweno wokukhetha ngendlela engeyiyo xa kuthethwa ngokutya. Phakathi kwezi zikhetho sinokutya okuqhubekekayo kunye nokutya okukhawulezayo. Oku kutya kwenziwa kunencasa ngakumbi kuba banamandla amakhulu kunye nomxholo wamafutha kunye neswekile. Ukusetyenziswa kwayo akukhuthazwa ngokubanzi, nangona kunjalo ewe singazonwabisa ngezihlandlo ezithile.
Ukuba ngumbuzo wokuthomalalisa iminqweno yokutya, zininzi iindlela ezizezinye eziluncedo zomzimba. Umzekelo, sifumana amandongomane kunye nembewu ezizezona zikhetho zibalaseleyo ukuba nje zezendalo okanye zosiwe. Kuyacetyiswa ukuba uziphephe zonke ezo ziqhotsiweyo, eziswiti kunye netyuwa.
Zilolonge ngakumbi kunangaphambili
Into egcwalise uthungelwano lwasentlalweni njengenkcubeko kukuba wonke umntu uye waba yimbaleki ebalaseleyo. Xa ungaphumela ngaphandle, asibonanga bantu baninzi bezilolonga. Nangona kunjalo, ukuvalelwa kuyeza kwaye basenza sihlale ekhaya kwaye bonke abantu bangamakhoboka omthambo. Iividiyo ezibukhoma, amaqonga oqeqesho, nditsho noqeqesho phakathi kwabantu abohlukeneyo kwiindawo zabo. Ibone yonke into.
Kuyinyani ukuba ukuthatha ikhefu kunye nokuphumla kancinci kuyo yonke into yinto efanelekileyo. Kodwa kufuneka kuqatshelwe ukuba ukuzilolonga sisixhobo esisebenzayo sokunxibelelana nathi kwakhona. Kwaye kunjalo Ukuzivocavoca umzimba kunokunceda ukunciphisa uxinzelelo, uxinzelelo kunye nokusebenza komzimba ngaphezulu yokubuyela ekhaya. Iindawo ezincinci ezivaliweyo zihlala zivelisa uxinzelelo ngakumbi kunaleyo ivulekileyo. Ke ngoko, abo bantu banethambeka elikhulu lokuzilolonga baye bavalelwa ngcono.
Nangona uthanda yonke into, kufuneka yenziwe ngokumodareyitha nakwinqanaba apho wonke umntu anokufikelela khona. Into ebaluleke kakhulu kukugcina inkqubo yesiqhelo, imikhwa yokuvalelwa inokukunceda uyenze ikhaphukhaphu ngalo lonke ixesha. Kodwa ungaziva unyanzelekile ukuba wenze umthambo okanye naluphi na uqeqesho esingaluthandiyo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nemikhwa yokuvalelwa esenze ukuba sidlulise ixesha ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Imikhwa yokuvalelwa
Uyifaka njani intombazana